प्रचण्ड कमरेड तपाईले सपना देख्न छाडेकै हो र ?
Tuesday, 13 Oct, 2015 12:30 PM
अभावै–अभाव,पीडा,आसुँ र क्रन्दनबाट गुज्रीरहेको देशको एउटा नागरिक भएर यो पत्र तपाईलाई लेख्दैछु । मुलुकले तपाईकै गठजोडमा नयाँ संविधान त पाएको तर संविधानले सानो सलाईको काटि पनि छाडिदिएको छ समाजमा । तपाईलाई त थाहै छ, सानो सलाईको काटीले पनि संसार जलाउन सक्छ । संविधान पाएकोमा हामी खुसी छौं,तर सारा देश खुुसीको उन्मादमा रमाउन सकेको छैन । प्रिय प्रचण्ड, समकालीन राजनीतीमा तपाइले खेलेको भुमीका अत्यन्त प्रशंशनीय छ तथापी तपाईले यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको छैन,नेपाली समाजलाई ।
संविधान सभापछिका तीन एमालेका प्रधानमन्त्रीहरु एमाओवादीकै सहयोगमा वने । हुन त तपाईलाई पनि अनौठो लाग्दो हो तपाइकै होनहार सयौ कार्यकर्ता मार्न निर्देशन दिने कमल थापा,एमाओवादीलाई वादँरको संज्ञा दिने ओली आज तपाईका कत्ति निकट । अनी जीन्दगीभरी प्रचण्ड हाम्रो सुप्रिम नेता भनेर मर्न र मार्न तयार हुने नेता कार्यकर्ता पराई । तपाईलाई कहिल्यै कम्युनिष्ट नदेख्ने ओलीसंग अचम्मको प्रेम,युद्धका हरेक मोर्चाहरुमा संगसंगै रहेका वैद्य,बादल,विप्लव सौतेनी आमाका छोराजस्तै ।
राजनीती अनौठो खेल हो भन्ने त सुनेको थिए तर यत्ति अनौठो हो सोचेकै थिइन मैले । कमरेड,साच्चै तपाईको सपनामा रुकुम,रोल्पा,कर्णालीका दुखहरु आउन छाडेकै हुन त ? के तपाईको मुटु यत्ति निर्दयी भएकै हो त ? सोच्नुस त युद्धमैदानमा परिवर्तन आउँछ र देश वन्छ वनेर गोली थापेकाहरुको सपना पुरा भयो त ? हो गणतन्त्र आयो,संविधान आयो तर जुन थारु,मधेशी,दलितहरुले तपाइकै नेतृत्वमा सञ्चालीत युद्धमा रगत वगाए,उनिहरुका परिवारजनमा खुसी छायो त ? अहँ कमरेड त्यसो कदापी हुन सकेन् । हुन त तपाई राजनीतिको अनौठो खेलाडी हो तर तपाईले त खेल पनि अनौठो खेल्नुभो न हारेजस्तो न जितेजस्तो । मैदान तपाईले वनाएजस्तो मज्जा अर्कैले लुटेजस्तो,खाना तपाईले पकाएजस्तो पेट अर्कैले भरेजस्तो । रगत माओवादीले वगायो तर रगतको व्याज अर्कैले खाएजस्तो कस्तो अनौठो हगि । तपाईकै भाषमा भन्ने हो भने तपाईले देशका लागि त्याग गर्नुभो,ठुलो रिस्क मोल्नु भो तर कमरेड कस्का लागि ।
हो राजनीतीमा स्थायी केही हुदैन तर यत्तिसम्म घटिया लेवलसम्म राजनीती पुग्दैन होला । हो मुलुकको संकट टार्न नयाँ सरकार आवश्यक थियो,तपाईले सहयोग गर्नुभो तर सरकारमा जानु हुदैन्थ्यो सुण्ड,मुण्ड र मण्डलेहरुको । तपाईले एक कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई गुनासो गर्दै भन्नुभो –‘संविधान वनाएकोमा खोइ मलाई वधाइ दिएको ।’ त्यहीबाट तपाईले वुझ्नपर्दथ्र्यो कि तपाईका लािग जीवन दिने सहिद,वेपत्ता,घाइते अपाङ र भोक,प्यास नभनी लडेकाहरुको मन कदापी खुसी छैन । यतिवेला तपाईलाई काग्रेस–एमालेजनका सवैभन्दा वढी वधाई आएका छन तर तपाईका कुनै समर्थक,शुभचिन्तकबाट आएको छैन । के काग्रेस–एमाले,कमल थापहरु प्रिय भएर अरु सवै तपाईका पराई भएकै हुन त ? तपाई मान्नुस या नमान्नुस अहिले तपाईले ओली नामको सर्पलाई दुध खुवाएर अमृत ओकल्नेछ भन्ने आशा गर्नुभएको छ ,तर जुनसुकै प्रजातीको सर्प भएपनि त्यसले विषै ओकल्छ ।
एकदिन त्यही सर्पले तपाईले डस्नेछ,त्यत्तीवेला अहिले तपाईले चाहिन्नन् भनेर हेपेका डाक्टर र वैद्यहरु नै काम लाग्नेछन् । तपाईले अस्ती भन्नु भो पार्टिलाई २ वर्षपछि एकनम्वर वनाउँछु भनेर तर के यसरी नै वन्छ एकनम्बर पार्र्टी । तपाईका हजारौ कार्यकर्ताहरु अवरको खाडीमा ४० डिग्रीको प्रचण्ड गर्मीमा जीन्दगी चलाउन दिनरात मरिरहेका छन् । कुनै दिन पुष्पकमल अर्थात प्रचण्ड कत्ति प्यारो थियो कार्यकर्ताका लागि तर आज हेर्नुस त अरबको प्रचण्ड पो प्यारो भयो ।
के यि सव कुरा तपाईका सपनामा आउन छाडेकै हुन त कमरेड । अन्त्यमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री वनाउन जत्ती तपाईले प्रयास गर्नुभो त्यत्ती तपाइका चिराचिरा परेका पार्टीहरुलाई एक गर्न कम्मर कसेको भए तपाईको हैसियत अर्कैै हुन्थ्यो । आज देशले,रुकुम,रोल्पा,कर्णाली र सुदुरले प्रचण्ड मात्रै होइनन्,वैद्य,बाबुराम,विप्लव,बादल सहितको पुरानै ढिडो र खोलेमा रमाउने माओवादी चाहेका छन् । के तपाईले त्यो साहस र त्याग गर्न सक्नुहुन्छ । के प्रचण्ड पुष्पकमलबाट लाजीम्पाटहरु छाडेर पुरानै झुपडीमा रमाउन सक्ने प्रचण्ड वन्न सक्छ ? त्यसैमा तपाईको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।
अहिलेलाई यत्ति,सुदुरको भुमीबाट तपाईको शुभचिन्तक केशव जोशी ।